भारतमा लकडाउन दुई हप्ता थप गरिने « Postpati – News For All
कोरोना भाइरस दाङ पक्राउ रोल्पा नेकपा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री ओली राशिफल विप्लव नेकपा प्रधानमन्त्री
कञ्चनपुरमा धारिलो हतियार प्रहार गरी एक पुरुषको हत्या
भारतमा एकैदिनमा झण्डै २५ हजार नयाँ सङ्क्रमित थपिए
काठमाडौंमा एकै दिन भेटिए २७ जना कोरोना संक्रमित
नुवाकोटमा थप २ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
पछिल्लो २४ घण्टामा २९३ संक्रमित थपिए, १३२ जना संक्रमण मुक्त
ओली र ‘प्रचण्डबीच बालुवाटारमा झण्डै डेढ घण्टा छलफल
भारतमा लकडाउन दुई हप्ता थप गरिने
एजेन्सी पढ्न लाग्ने समय : २ मिनेट
चैत २९, भारत । भारतमा लकडाउनको अवधी दुई हप्ता थप गर्ने तयारी गरिएको छ । यसको औपचारिक घोषणा भने हुन बाँकी रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विभिन्न राज्यका मुख्यमन्त्रीहरुसँग चार घण्टा लामो छलफल गरेपछि यसको संकेत मिलेको हो । बैठक सकिए लगत्तै नयाँ दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले ट्वीट गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्रीले लकडाउन बढाउने सही फैसला लिनुभएको छ ।’
त्यस्तै, पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले पनि भनिन्, ‘अप्रिल ३० सम्म लकडाउन बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको छ । हामी वहाँको फैसलाको समर्थनमा छौँ ।’ यद्यपि, लकडाउन बढाउने घोषणा कहिले गरिनेछ भन्ने यकिन छैन ।
केजरीवाल र ममता बनर्जीको बयानपछि प्रधानमन्त्रीले शनिबार राति आफै देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै लकडाउन बढाउने घोषणा गर्ने मिडिया रिपोर्टहरु सार्वजनिक भएको थियो । तर, सरकारी सुत्रले प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
बैठक सकिएको डेढ घण्टापछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको तर्फबाट पनि बयान जारी भएको थियो । जसमा राज्यहरुबीच दुई हप्ता अझै लकडाउन थप्ने सहमति भएको उल्लेख थियो । लगत्तै, महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री उद्धव ठाकरेले प्रेस कन्फरेन्समार्फत राज्यमा अप्रिल ३० सम्म लकडाउन जारी रहने घोषणा गरे ।
दिल्लीसहित १२ राज्य सरकार लकडाउन बढाउने पक्षमा छन् । पञ्जाबको काँग्रेस सरकार र ओडिशाको बीजद सरकारले ३० अप्रिलसम्म लकडाउन बढाउने फैसला गरिसकेको छ । बाँकी राज्यले पनि प्रम मोदीलाई कम्तिमा दुई हप्ता लकडाउन बढाउन सुझाव दिएका छन् ।
यसअघि मोदीले गत २० मार्च र २ अप्रिलमा मुख्यमन्त्रीहरुसँग छलफल गरेका थिए ।
२०७६ चैत्र २९,शनिबार को दिन प्रकाशित
बागलुङमा क्वारेन्टाइनमा बसेका एक युवकको मृत्यु
सुस्मिता हत्या प्रकरणका आरोपी सार्वजनिक, जबर्जस्ती करणी गरेको खुल्ने डरले हत्या !
सल्यानको बुराँसेमा एक युवाले गरे झुण्डिएर आत्महत्या
घरमा कोहि नभएको मौका छोपी आफ्नै छोरीमाथि बलात्कार, ३९ वर्षीय बाबु पक्राउ !
रोल्पामा क्वारेन्टाइनमा बसेका एक पुरुषद्वारा आत्महत्या
आहा ! कति रमाइलो असार, २८ तस्वीरमा हेर्नुहोस् (फोटोफिचर)